सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा २८ प्रतिशतले बढोत्तरी, अन्य सूचकको अवस्था के ? – Insurance Khabar
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा २८ प्रतिशतले बढोत्तरी, अन्य सूचकको अवस्था के ?
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७५, आईतवार ०७:२९
इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौंः चैत मसान्तसम्ममा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड २८ दशमलव ८१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा नाफा बढाएर १८ करोड पुर्याएको हो ।
६४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीले जगेडा तथा कोषमा भने १२ करोड ७ लाख ११ हजार रुपैयाँ राखेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषमा ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने महाविपत्ती जगेडा ६ करोड ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ ।
यो अवधिमा कम्पनीले ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गतवर्षको सो अवधिमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ५३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले सो अवधिमा ३१ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
हालसम्म ८४ हजार ८ सय ९५ बीमालेखबाट १ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ६ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ४ हजार ११० बीमालेखको ७३ करोड २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीमा २ हजार ६ सय २१ बीमालेखको ५८ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भने दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
कम्पनीमा २२ हजार ५ सय ८८ बीमालेख भने नविकरण नगरिएको देखिन्छ ।